Fakafaka: misokatra indray ny tsena… | NewsMada
Fakafaka: misokatra indray ny tsena…
Raikitra ny fampielezan-kevitra ! Ifaninanan’ny kandidà ny fakana ireo mpanakanto, toy ny mpihira, ny mpanao hatsikana, ny mpikabary, sns, tena faran’izay « ngezalahy » hoenti-misintona olona mba ho avy. Na tsy mifanaraka loatra amin’ny filan’ilay faritra hanatanterahana fampielezan-kevitra aza, alaina ihany satria malaza. Misokatra ny tsena ho an’ny mpanakanto satria misy sandaina amina volabe izy ireny. Tahaka izany koa ny an’ireo manana fanamafisam-peo, ny tompona sehatra, sns.
Ho an’ny mpanakanto manokana, tsena mandalo ihany ny tahaka izao. Rehefa tojo ny seza ipetrahany ny mpanao politika, tsy fantany akory ny olana mianjady amin’ny tontolon’ny zavakanto malagasy. Toa tsy olana akory aza ny fijerin-dry zareo ny zava-manjo ny kolontsaina fa kisarisarin’olana ihany ka tsy ilaina loatra ny mamaha azy… Tsy mety miova mihitsy io tranga io fa isaky ny misy fampielezan-kevitra, mipoitra hatrany !
… Tsy mety manaiky ny sain’ireo mpilalao politika ireo fa ny tsy fananan’ny Malagasy fototra mafy orina amin’ny maha izy azy no mahatonga an’i Madagasikara hifotetaka amin’ny tany tahaka izao. Iray sady goavana amin’izany fototra izany ny kolontsaina. Tsy mety homen-dry zareo lanja mihitsy anefa izy io. Tahotra ve sa baikom-bahiny ny tsy hanomezana lanja sy hasina ny kolontsaina malagasy eto amin’ny taniny ?
… « Ilay toe-tsaina mihitsy no sadasada… », hoy ilay mpandinika ny fiarahamonina iray izay. Mihevi-tena ho ambany raha mitia sy miaina ary mampiasa ny kolontsaina malagasy. «… Mihevi-tena ho ambony kosa raha mirehareha amin’ny kolontsaim-bahiny », hoy hatrany ity manampahaizana ity.
… Ka maninona tokoa moa raha ataonareo amin’ny fiteny vahiny ny fampielezan-kevitrareo ka jerena eo izay ho tohiny ? Efa mahazatra anareo ange ny fanaovana tsinontsinona ny kolontsaina (anisan’izany ny teny) malagasy e ! Sa ve Malagasy ianareo rehefa hitady seza fa saribakolim-bahiny rehefa azonareo izany seza izany ?